Aka na-achị steeti Anambra bụ Gọvanọ Willie Obianọ enwetena aha echichi ọhụụ 'Dike e ji eje mba' site n'aka ndị obodo Ogidi, bụ nke dị n'okpuru ọchịchị Idemili Nọọtụ na steeti ahụ.
Gọvanọ Obianọ natara ya bụ oke echichi pụrụ iche na mmeme Ilo Mmụọ bụ nke weere ọnọdụ n'obi eze ọdịnala obodo ahụ, bụ Igwe Alex Ọnyịdo, ma bụrụkwa mmemme ndị obodo ahụ na-eji eme emume iri ji ọhụụ ha.
Ya bụ mmemme bụ nke dọtara ndị ukwu ndị ukwu dị iche iche site na mpaghara dị iche iche n'ala anyị, nke gụnyere gọvanọ Willie Obianọ na osote ya bụ Dọkịnta Nkem Okeke, onye isi otu pati APGA n'ala anyị n'oge mbụ, ma bụrụkwa onye isi otu ịchụ nta nkwado maka ịhọpụtagharị gọvanọ Willie Obianọ nke ugboro abụọ, bụ Maazị Victor Umeh, tinyere ọtụtụ ndị ọrụ gọọmeenti dị iche iche na ụmụafọ obodo ahụ.
Ka ọ na-echibe ya echichi ahụ, Igwe Ọnyịdọ sị na ya bụ mmemme bụ nke dịbara gboo iji kwalite mmekọrịta na ịdị n'otu nke ndị obodo ahụ, ma kpekwazie ekpere ka owuwe ihe ubi nke ahọ a bukarịchaa nke ndị gara aga. O toro gọvanọ Obianọ n'ihi ihe dị iche iche o mepụtagoro kemgbe ọ rịgooro n'ọkwa ọchịchị, ọ kachasị na ngalaba ọrụ ugbo, nchekwa na ihe mwunye, ma gwakwazie ya na ndị obodo ahụ ekpebiena ịkwado ya na nhọpụta ahụ na-abịa n'ihu na steeti ahụ n'ihi na o gosina ha ịhụnanya.
N'okwu nke ya kwa, otu nwaafọ obodo ahụ ma bụrụkwq onye a ma ama n'ịzụ ahịa, bụ 'Chief' Sam Anyanwụtakụ, mere ka a mara na site n'aka gọvanọ Obianọ, na Chineke ewechighatana udo n'obodo, bụ nke gbapụrụ kemgbe ihe karịrị ahọ iri abụọ gara aga a na-azọ eze na ya bụ obodo, ma sịkwazie na echichi ahụ bụ iji kele ya n'ihe o meere ha.
Na nzaghachi, gọvanọ Obianọ kelere Igwe Ọnyịdọ na Ogidi niile banyere nnukwu nkwanye ugwu ahụ ha nyere ya ma kwe ha nkwa na ọ ga-aga n'ihu na-echeta ndị obodo ahụ n'ọchịchị ya. Ọ sị na ọrụ ijikọ aka ọnụ nke ya na ndị Anambra iji hụ na e nwere ịdị n'otu na ezi ọnọdụ obibi ndụ so n'ezi ihu na mbọ ọchịchị ya na-agba, na n'ihi ya, na ọ ga-agakwa n'ihu n'ịkwalite ezi ọdịmma ahụ site n'ọchịchị ya.
N'ozi ekele ya, ode akwụkwọ mgbasa ozi nke otu pati APGA n'ala anyị bụ maazị Ifeatụ Obi-Okoye, onye bụkwa nwaafọ obodo ahụ kwuru na mmemme ahụ nke e jikwa echeta ọgbụgba otu ahọ Igwe Ọnyịdo jiri rịgoro n'ọkwa ọhịchị bụ nke dara ụda n'ihi na ngọzị ọdịnala amalitekwana ịbatara ụmụafọ obodo ahụ n'ịgba mbọ ha niile, ka ọ gasịrị nnọọ ihe karịrị ahọ iri abụọ.
Imepe ụlọ ọrụ nhazị ọhụụ nke eze ọdịnala ahụ na egwu ọdịnala dị iche iche a gbara so n'ihe pụtakarịchara ihè na ya bụ mmemme.